Asa 11 - Ny Baiboly
Asa toko 11
Ny nilazan'i Piera ny tsy maintsy handraisana ny jentily - Ny nidiran'ny fivavahana tany Antiokia - Barnabe sy Saoly.
1Ren'ny Apostoly sy ny rahalahy tany Jodea fa hoe nandray ny tenin'Andriamanitra koa ny jentily. 2Koa nony tafakatra tany Jerosalema Piera, dia nomen'ireo mpino voafora tsiny, 3nataony hoe: Nahoana hianao no niantrano tany amin'ny olona tsy voafora, sady niara-nihinana taminy? 4Dia nitantara ny zavatra niseho hatramin'ny niandohany Piera ka nanao hoe: 5Raha nivavaka tany an-tanàna Jope aho, dia azon-tsindrimandry ka nahita zavatra anankiray toa lamba lehibe nifatotra tamin'ny zorony efatra, nidina avy any an-danitra, tonga tao amiko. 6Nony nijery azy aho ka nandinika, dia hitako tao ny biby manana tongotra efatra, ny biby dia, ny biby mandady, ary ny voro-manidina. 7Ary nisy feo reko koa nanao hoe: Mitsangàna, ry Piera, mamonoa ka mihinàna. 8Fa hoy izaho: Sanatria, Tompoko, tsy mbola nisy zavatra fady sy maloto mba niditra tao am-bavako. 9Fa niteny indray ilay feo tany an-danitra nanao hoe: Aza ataonao ho maloto izay efa nodiovin'Andriamanitra. 10Intelo no naverina natao izany, dia nakarina tany an-danitra indray izany rehetra izany. 11Niaraka tamin'izay, dia indreo nisy olona telo lahy tonga tao an-trano nitoerako, nirahina avy tany Sezarea hankany amiko. 12Ary hoy ny Fanahy Masina tamiko: Aza misalasala hiaraka amin'izy ireo. Dia niaraka tamiko koa ireto rahalahy enina ireto, ka niditra tao an-tranon'i Kornely izahay.
13Notantarain-dralehilahy taminay ny nahitany ny anjely nitsangana tao an-tranony, ka nanao taminy hoe: Maniraha ho any Jope, ampanalao Simona izay atao hoe Piera, 14fa izy no hilaza aminao ny teny izay hahavonjy anao sy ny ankohonanao rehetra. 15Ary raha vao niteny tamin'izy ireo aho, dia nidina taminy toy ny nidinany tamintsika taloha koa ny Fanahy Masina. 16Tamin'izay dia tsaroako ny tenin'ny Tompo nanao hoe: Joany nanao batemy tamin'ny rano, fa hianareo kosa hatao batemy amin'ny Fanahy Masina. 17Koa raha fanomezana sahala no nomen'Andriamanitra azy sy antsika izay nino an'i Jesoa-Kristy Tompo, iza moa aho no ho afa-mifanohitra amin'Andriamanitra? 18Nony nandre izany izy ireo, dia sady nangina no nankalaza an'Andriamanitra nanao hoe: Efa nomen'Andriamanitra ny fibebahana hahazoany ny fiainana koa ny jentily.
19Tamin'izany, izay naelin'ny fanenjehana noho ny amin'i Etiena dia tonga hatrany Fenisia, sy Sipra, ary Antiokia, nefa tsy nitory teny afa-tsy tamin'ny Jody ihany. 20Ny sasany tamin'izy ireo anefa izay lehilahy avy any Sipra sy Sirena, dia mba nisy niteny tamin'ny Greka ihany nony tonga tao Antiokia, nitory an'i Jesoa Tompo. 21Nomban'ny tànan'ny Tompo izy ireo, ka betsaka no nino sy nanatona ny Tompo. 22Nandre ny lazan'izany ny Eglizy tao Jerosalema, ka naniraka an'i Barnabe hankany Antiokia. 23Nony tonga tany izy ka nahita ny fahasoavan'Andriamanitra, dia faly sy namporisika azy rehetra mba haharitra ao amin'ny Tompo amin-kerim-po. 24Fa lehilahy tsara fanahy izy, sady feno ny Fanahy Masina sy finoana, ka vahoaka betsaka no nikambana tamin'ny Tompo. 25Dia lasa nankany Tarsy Barnabe hitady an'i Saoly; ary nony efa hitany izy, dia nentiny hankany Antiokia. 26Ka herintaona maninjitra no nanaovany fivoriana tao amin'io Eglizy io, ary vahoaka betsaka no nampianariny. Tao Antiokia koa no voalohany nandraisan'ny mpianatra ny anarana hoe: Kristianina.
27Tamin'izany andro izany dia nisy mpaminany sasany avy tany Jerosalema tonga tao Antiokia. 28Ary voatsindrin'ny Fanahy Masina ny anankiray tamin'izy ireo atao hoe Agabosa, ka nitsangana nilaza fa hisy mosary lehibe amin'izao tontolo izao. Dia tonga tokoa izany tamin'ny andron'i Klaody. 29Ary nanapa-kevitra ny mpianatra fa hampitondra fiantrana araka ny ananany, hamonjy ny rahalahy nonina tany Jodea, 30ka notanterahiny tokoa izany; Barnabe sy Saoly no nampitondrainy izany fanampiana izany ho any amin'ny Pretra. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0092 seconds